ABO Jabeessuun Yeroon Isaa Amma. Bishaan Xiiqii fi Heexoo Cuqqaallatanii dhugu | Kichuu
Posted on October 29, 2020 by kichuu_admin
8. Gaafa Onkoloolessa 12, 2020 haala seera biyyaa fi adunyaa akkasumas mirga dubbachuu fi yaada ofii ibsachuu cabseen humni mootummaa wayita Hayyu Dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa mana isaanitti ibsa midiyaaf keennaa jirani humnaan seenuun qophii sududaan darbaa ture ugguran. Guyyuma sanatti ammo murni biroon OBN irratti akka ibsa kennu taasifame. Tokko humanaan ugguru, tokkof ammoo carraa midiyaa kennu
Kun warra carraa kennaniifis fayyaduu osoo hin taanee, dhaabicha gidduutti waldhibdeen akka babal’atu gochuuf kan akeekkate ture.
” Qomoon wal gurmeeysee, fiincila ittii qabsiisee, bilisummaan urgooftee, reefuu garaan na ciisee’: weelle jaafar yusuf
. Mooraan keenya haala gammachiisa irra gahee jira. Hooggana WBO zooni kibbaa jaal goolicha dheengee.
Guyyaa arraantana waaree booda godina boorana Aanaa Dubluqi ganda bokossatti ijoolleen oromoo lakkoofsaan 50 gahan poolisii humna addaa oromiyaa hidhannoo guutun wajjiin gara mooraa wboti galaniruu.akkas kunoo ilma sabaa jechuun.kan garaaf jedhee saba isaa hin ajjeefne.moraa diinaa keessa taee obboleessa isaatti dhukaassurra keessaa bahee diinatti dhukaasuu wayya jedhanii gara qabsoo saba isaatti deebian kana mee share ,like itti naa robsaa qomoo koo kana
Kanneen haftanis waluma jala.
Oromoon hirkattuu miti!
Waanumti nama gaddisiisu ammoo ilmaan OPDO Tigiree waliin tumsa qabsoo ijaaruuf humna isaan dandeessisu humna hidhate hin qaban!
Bara 1991 Abbaa Duulaa fi Kumaa Dammaqsaa Oromoo fi Oromiyaa Tigireetti gurguratan! Qabsoo hadhooftuu waggaa 26 booda Oromoon injifannoon Qabsoo isaa yeroo goolabuuf jedhutti ilmi OPDO Jawar Mahammed bara 2018 Oromoo fi Oromiyaa Nafxanyaatti gurgure.
Oromoon abdii otoo hin kutiin qabsoo bara 2018 Jawar gurgure afaan Nafxanyaatii baasuuf qabsoo itti fufe. Keessaattuu yeroo ammaa #qabsoo_WBOn gaggeessaa jiru muutummaa Nafxanyaa/PP, OPDO fi ilmaan OPDOtti sodaa guddaa ta’ee jira.
Turtii waggaa lama booda ammas #ilmaan_OPDO /ilmaan Abbaa Duulaa/ fi #Tuutni_OMN marsaa biraaf deebisanii Oromoo fi Oromiyaa harka Tigireetti galchuuf fiigaa jiru. Oromoon hidhatee lolee, lolchise injifatee biyya ofii yoo dhhunfate rakkoo maalii akka qabu ilmaanuma OPDO/ilmaan Abbaa Duulaa/ warreen Tigiree jala kaatantu beeka! Shira kana maaliif akka xaxaa jiran murna OMN fi garee dhokataa lafa jalatti gandaan of ijaaran nuuf gaafadha.
Waanumti nama gaddisiisu ammoo ilmaan OPDO kanneen akka Seenaa Jimjimoo, Jawar Mahammed fi gareen OMN Tigiree waliin tumsa qabsoo ijaaruuf humna isaan dandeessisu humna hidhate hin qaban. Waraana hidhatee Oromoo tikisuu danda’u #nama_tokko hidhachiisanii hin qaban. Faallaa kanaan garuu Tigireen waraana kumaatamaan hidhachiiftee of harkaa qabdi. Jarri kuni akkuma abba isaanii Abbaa Duulaa harka qullaa Tigiree jala kaatee Oromoo gurgure isaanis harka qullaa akka ree’eetti arrabaan lallabaa Oromoo garbummaa Tigiree jala marsaa lammaffaaf galchuuf kaatu.
Ilmaan OPDO kanneen akka Jawar, Seena Jimjimoo, Birhanemeskel Abbebee garee warra kaabaa (Tigiree fi Amaara) jala dhoksaan halkanii guyyaa yeroo fiigan, faallaa kanaan ammoo mooraa tokkummaa Oromoo, Waraana Bilisummaa Oromoo fi qabsoo Bilisummaa Oromoo shiraan diigaa oolanii bulu. Kana mirkaneeffachuu abbaan barbaade, quuqama Oromummaa namni qabu waan Jawar fi Birhanemeskel Abbebee waggaa lamaa asitti fuula FB isaanii irratti katabaa turan ilaala. Keessaattu bara 2018 fi 2019 keessaa waan jarri kuni lamaan waa’ee WBO/ABO barreessaa turaniifi waa’ee OPDO katabaa turan ilaala. Sa’aatti kanatti ammoo waan Seena Jimjimoo, Birhaanemasqal Abbabee fi Tuutni OMN dalagaa jiru ilaala.
Gantuu gantuun guddiste irraa sabboonummaa eeguun mataan isaa tisiisa irraa damma eeguudha!
Waan hundaafuu ilmaan Oromoo bakka jiru maraa tokkummaan #qabsoo_ofirratti_hirkannaa amma Oromoon gochaa jiru daraan jabeessee itti fufuun Bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf xiiqii keessa galuu qaba. Oromoo saba guddaa, qabeenya guddaa qaba. Qabeenyi bilisummaa saba ofiif hin taane gatii hin qabu. Qabeenyi walabummaa biyya ofiif hin taane hamma fincaan namaati. Qabsoo hadhooftuu enyurratti otoo hirkatiin galmaan ga’uu dandeenya. Otoo gargaarsa argannee gaarii ture. Yaalleerra, garuu gargaarsa hin arganne. Qabsoos maqaa #Oromummaa irraa molquun maqaa halagaan, #SOMAALEE_ABBOO, jedhamuun Waaqoo Guutuu gochaa ture mataan isaa bu’aa hin buusne. Sirumayyuu qabsoo ofirratti hirkannaa ABOn erga eegalee asitti bu’aa gurguddaatu argame. Bu’aa sana keessaa tokko Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi WBO bosonaa Oromiyaa fi RIB Itoophiyaa keessaatti ijaaruun humna TPLF fonqolchinus akkuma olitti ibsame bara 2018 ilmi OPDO injifannoo xiqqoo argamte sana gara dabrsee gurgure.
Ammas tanaan cululleewwaan ilmaan OPDO alaa fi keessaa miidiyaa dhuunfatte waccu ofirraa tiksuun qabsoo ofirratti hirkannaa gaggeessuudha. Kana gochuuf ammoo humna amma hidhatee jiru #WBO daraan jabeesuusdha malee dhufaa darbaa #hirkattummaan Nafxanyaa jala oofamuu hin qabnu. Garee ilmaan OPDO Oromoo Tigiree fi Amaara jala oofu maraa ofirraa tiksuun QBO galmana gahuu qabna!
WBOn haa lalisu!
Baha Oromiyaa Harargee bahaa Magaalaa Awwadaayitti Humni Addaa Oromiyaa fi RIPF waliin tahuudhaan akkaataa Qeerroo fi Qarree naannichaa ittiin tohachuun dandeyamu Dhalataa bakka biraa irraa dhufee magaalaa Harargee baha keessaa jiraatu Akkamitti to’achuu Akka danda’aniif dhalataan bakka biraa irra dhufee Godina kana keessa jiru maal Akka hojjechaa jiruuf Essatta akka galu akkamiin akka beeku danda’aniif akkamitti akka hordofan irratti kan marihachaa jiran tahuu maddeen gabaasan.
Bulchiinsa Magaalaa Awwadaayitti Humni adda Polisii Oromiyaa fi RGB ja’amuun kan waamaman kunneen waliin tahuudhaan yeroo gara-garaatti hawaasa nageyaa irratti ajjeechaa ,saamichaaf reebicha kan raawwaa jiran tahuun beekkamadha
Kanaaf Qeerroof Qarreen Akka of eeggattan isiniin jenna!
mootummaan nafxanyaa Abiyyin hogganamu ilmaan oromoo miilla fayyaa turan tumanii caccabsanii akka isaan kiraanchiin deeman godhaan
Waraanni Izii kaabaa Tigiraay keessa kan jiruu Abiyyi buqqisee Amaaraa geessuu fedhuu uummata Tigiraay waliin waliigalee hawwaannisa dhabamsiisuu irratti bobba’ee jira.
Ayi Abiyyi… dhumikee fagoo miti.